घर > उत्पादनहरू > PPR पाइप्स र फिटिंग > पीपीआर पाइप फिटिंग्स > DIN8077 PPR Stop Valve
DIN8077 / 8078 जल नलसाजी को लागि मानक पीपीआर बंद वाल्व & amp; ताप, PN25 मा dn20-110mm बाट साइज, छनौटको लागि हरियो / खैरो / सेतो रङहरू, उत्तम गुण द्वारा उत्पादित गरिन्छ जुन 15 वर्षको साथमा सहभागी हुन्छन्, उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी थोक मूल्य & amp; शीघ्र वितरण पूरा गर्न सकिन्छ। SUNPLAST बाट PPR बन्द वाल्व को थप विवरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !!!
हो, नमूना सानो मात्राको लागि उपलब्ध छ.
A:एचडीपीई पाइपले पालीथाइलले बनाएको गर्म पानीको आपूर्तिको लागि उपयुक्त छैन। PPR पाइप अधिकतममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 95â "ƒ तापमान हट पानी।
गर्म पानीको लागि पाइपिंग प्रणालीको लागि, त्यसपछि PPR पाइप राम्रो छनौट हो। अन्यथा ठण्डे पानीको लागि, HDPE पाइप यो धेरै राम्रो गर्न सक्छ।
हट ट्याग: DIN8077 PPR Stop Valve, China DIN8077 PPR Stop Valve, China DIN8077 PPR Stop Valve suppliers, DIN8077 PPR Stop Valve suppliers, DIN8077 PPR Stop Valve manufacturers, DIN8077 PPR Stop Valve factory, China DIN8077 PPR Stop Valve manufacturers, China DIN8077 PPR Stop Valve factory, DIN8077 PPR Stop Valve price, buy DIN8077 PPR Stop Valve, DIN8077 PPR Stop Valve made in China
PN25 PPR बन्द वाल्वPPR बन्द वाल्व हरियोPPR बन्द वाल्वPPR Stop Valve For WaterPPR Valveppr fittingsppr pipe fittingspprc fittingPolypropylene फिटिंगhot water ppr pipe